Ukulethwa kwezimpahla kusuka eSwitzerland
Isevisi iSwitzerland Apteka inikeza izinsizakalo zokuthenga nokudilizwa kwempahla evela eSwitzerland. Ukuthengwa kwenziwa kuphela kuma-pharmacy esemthethweni, izitolo kanye ngqo nabakhiqizi. Ukuthumela kwenziwa ngeposi laseSwitzerland.
Ungaqiniseka ngekhwalithi yaseSwitzerland yemikhiqizo enikeziwe.
I-1) Ukulethwa okujwayelekile kwamaviki we-2-3 (I-Swiss Post)
I-2) Ukulethwa okuphuthumayo kufika emahoreni we-48 noma kuphi eYurophu, kuze kube ngamahora we-72 noma kuphi emhlabeni (lapho indiza indiza khona). Kukhona imikhawulo yesiko. Cacisa izindleko nezinketho zokulethwa ngawodwana.
Impahla ithunyelwa esuka eSwitzerland ngokuthutha kanye nezinkampani zeposi. Ezweni ngalinye kunemikhawulo yamasiko ezindleko eziphezulu zezimpahla ezithunyelwe, sicela ucabangele lokhu ngokulandelana.
Ukulethwa eYurophu. Izinga lokuletha lixhomeke ekuphuthumeni komyalelo futhi kubalwa ngamunye kumaklayenti ngamunye.
Ukuthumela e-Asia: Ukunikezwa kwephakheji evela eSwitzerland kungenzeka kuHong Kong, lapho ungathumela khona e-Asia ngezinye izinkampani zokuthutha. Ngaphezu kwalokho, ungathola iphasela elithunyelwe yi-Swiss Post eya ehhovisi leposi elihlala kuyo lapho uhlala khona.
Ukulethwa e-USA. Ukulethwa kwamavithamini kanye nemithi engavunyelwe ngaphandle kwemingcele, imithi yesidakamizwa, ucacise ngokungeziwe.
Ukulethwa eRussia. Ukukhokhwa kwama-oda afaneleka kuma-ruble e-15.000 eRussia kwenziwa ngemuva kokuthola. Imikhiqizo ibiza kakhulu kune-15.000p. unikezwe ngokukhokhelwa okukhokhelwayo okugcwele. Amakhasimende ahlobene nokuwela umngcele athathwa yiKhasimende, uma iphakheji lingadlulanga amasiko wezwe lakini, libuyiselwa eSwitzerland. Zonke izintengo kusayithi sezivele zifakwe ohlwini ngokulethwa eMoscow.
Ungalawula noma yikuphi umkhiqizo, okumele ufike ku-1000 euros. Imikhiqizo ebiza kakhulu kune-1000 euros ayifakwe eRussia ngenxa yemingcele yemikhuba, noma ingaphansi kokukhokhwa kwemali yamasiko ka-30% yezindleko zezimpahla.
Ukulethwa kwamanye amazwe emhlabeni. Ukulethwa kwe-imeyili okujwayelekile.
Ngosizo lweSwitzerland-Apteka service, ungakwazi ukuyala imithi, amavithamini, izimonyo zokwelapha, imikhiqizo yezingane kanye neminye imikhiqizo ezitolo nasemasimini eSwitzerland nakwamanye amazwe emhlabeni. Ngaphezu kwohlu oluhlongozwayo, ungahle wenze enye iminye imikhiqizo ehlobene nokusetshenziswa kwakho okungeke kuthengwe ezweni lakho.
Uma ungatholanga umkhiqizo oyidingayo, mhlawumbe awusakakhathalogi yethu, thumela isixhumanisi esivela kwenye isitolo emhlabeni futhi sizobala ukulethwa ekhelini lakho.
Uma unemibuzo eyengeziwe noma unikezwe ukubambisana, bhalela info@swiss-apteka.com